Hay’adda Culimada Soomaaliyeed oo sheegtay Ururka Alhlu sunna iyo Al-Shabaab isku mid yihiin. - XAL DOON
Home NEWS Hay’adda Culimada Soomaaliyeed oo sheegtay Ururka Alhlu sunna iyo Al-Shabaab isku mid...
Hay’adda Culimada Soomaaliyeed oo sheegtay Ururka Alhlu sunna iyo Al-Shabaab isku mid yihiin.
Hay’adda Culimada Soomaaliyeed ayaa go’aan ka gaartay Ururka la magac baxay Ahlu sunna ee sababta u ah barakaca ka socda Degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud.
Hay’adda ayaa sheegtay in aysan kala duwaneen Ahu Sunna iyo Al-Shabaab marka la eego fikirka diiniga ah ay ku dagaal gelinayaan Dadka u badan dhalinyarada.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha Hay’addda culimadda Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay isku midyihiin Ahlusunnada ay hoggaamiyaan Macalin Maxamuud iyo Sheekh Maxamed Shaakir ee ka dagaalanta goboladda dhexe Soomaaliya iyo Al Shabaab.
Sheekh Bashiir oo waraysi siinayay Channelka Youtubbe-ka ee BRIT SOMALI TV, ayaa sheegay in ay laba kooxood ay ka simanyihiin arragtida ah in qoriga lagu hirgaliyo xukunka ay doonayaan sida uu hadalka u dhigay.
“Al Shabaab iyo nimanka labaxay magaca Ahlusunna waxa ay ka midaysanyihiin fikar siyaasi ah oo hub lagu hirgalinayo oo awood iyo dagaal loo isticmaalayo” ayuu yiri Sheekh Bashiir.
“Dowladda aad la dagaalamaysid, askariga Soomaaliyeed ama Dowladda ha ahaado ama kuwa maamulka ee tukanaya ee aad ku dilaysid xukunka ayaan kaa qabsanayaa waa dambi dilna waa isku dil” ayuu ku jawaabay mar wax laga waydiidayay in aysan qaraxyo ka fulin Ahlusnna goobaha dadwaynuhu joogaan.
Sheekh Bashiir oo ka mid ah madaxda Jamaacada Al Ictisaam, ayaa sheegay in shaqada ugu badan ee laga rabo culimadda in ay tahay faafinta dacwada Islaamka.
“Qofka Sheekha ah shaqada u feecan ee uu qabo karo waa dacwo, waa wax u sheeg, marka maanta cid kastoo hub wadata, hubkaas is leh diinta ugu adeeg waxaan leenahay waa lagu soo gubtay faa’iido malahan dhiig xaaraan ah ayaad daadinaysaa, dad baad dulminaysaa, wax aan laguu diran oo aan diinta iyo Allah kuu diran ayaad isi saaraysaa, taas oo dulmi noqonaysa, diinta magaceeda aad ku ciyaaraysaa” ayuu yiri Sheekh Bashiir isaga oo beeniyay in fikirka culimada Al Itixaad iyo Al Ictisaam ay ka dhasheen dagaalyanaha hubaysan ee Al Shabaab.
“Al Shabaabku markii ay wax naga diideen hubkii ayay qaateen jihaad aan loo dirsan ayay galeen umadii intii kale waa ay iska horyimaadeen….. marka jihaadka maahan shaqo kooxeed, jamaaceed ee waa shaqo umadeed “ ayuu hadalkiisa raaciyay.
Mar wax laga waydiiyay in hay’adda culimadda Soomaaliyeed ay Ahlusnna kala hadashay in dagaalka joojiyaan ayuu ku jawaabay ”waa ka xunahay xiriir toos ah mala hilin laakiin dad kale ayaan u marsiinay waana u sheegnay in waxaan diin ahaan ay qalad yihiin”.
Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir oo si nabadgalyo ah looga ambabixiyay Galmudug ayaa dib ugu soo laabtay bishii hore iyaga oo qiil ka dhigtay in ay soo aadeen Siyaarada Sheekh Yuusuf Direed.
Dadka Degmada Guriceel oo aan jecleyn Kooxdaan ayaa isaga barakacay Magaalada kaddib markii Difaacyo ay ka dul qoteen Maleeshiyaadka la magac baxay Ahlu Sunna ee Sheekh Shaakir hoggaamiyaha u yahay.
Laftagareen oo Haweeney Xafiiskiisa katirsan siiyay kursi Baarlamaan.
Suuqa Xoollaha:-NISA oo u dhacday kaydkii Al Shabaab soona qabatay 3 sarkaal+Sawirro.
Mareykanka iyo Iiraan oo dib ugu xaajoonaya heshiiska Nukliyeerka ee Trump uu burburiyay.
4 Xildhibaan oo maanta lagu dooranayo Baydhabo.
Deni oo Garoowe kusoo bandhigay ciidan uu ku weerarayo PSF.
Maxay yihiin labada qodob ee Rooble u balanqaaday Midowga Mushariinta?